सभामुखले संविधान सार्वजनिक गर्दा भने नवोलीकनै किन गरे ?-Nagarikaawaj.com
सभामुखले संविधान सार्वजनिक गर्दा भने नवोलीकनै किन गरे ?
मङ्लबार, कार्तिक ४, २०७१
काठमाण्डौ ४ कात्तीक । संविधान सभाका सभामुख शुभासचन्द्र नेम्वाङ संविधान सभाको वैठकमा नवोलीकन कहिल्यै दिन जादैन । केही मन्तव्य अन्य सभासदहरुले राख्न खोज्दा समय पुगेन भन्दै वसाउन निकै अनुरोध गर्छन् र एकैछिन वैठक सचांलन गरेर केही दिन र घण्टाका लागी स्थगित गरेर निस्कन्छन् ।
उनै सभामुखले संसद भवनवाट संविधान सार्वजनिक गर्दा भने नवोलीकनै गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा उपस्थित सभामुखले संसद भवनवाट वर्षौवर्षदेखी नवनेको नेपालको संविधान भने सार्वजनिक गरेका भने होईन्न । उनले अब बन्ने नेपालको संविधान “शान्ति र विकास, न्याय र निसाफ” पूर्ण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनचाहानाको आवाज बोकेको हुनुपर्छ भन्ने विषय वस्तुमा तयार पारिएको “बनाऊँ नेपालको संविधान” नामक राष्ट्रभावले ओतप्रोत गितको भिडीयो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संविधान सभाका सभामुख नेम्वाङको प्रमुख आतिथ्यमा एक कार्यक्रमका विच संविधान सभाको भवन नयाँ बानेश्वरमा भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा चर्चित समाजसेवि तथा माईती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोईराला, गायीका सुनिता दुलाल, हास्यकलाकारहरु, कलाकार, नायक, नायीका लगायत विभीन्न विशीष्ट अतिथीहरु उपस्थित थिए ।
तर, कार्यक्रममा एक शव्द पनि नवोलीकनै कार्यक्रम सकाएर एकाएक सभामुख भागेपछि भने आयोजकहरु जिल्ल परेका छन् ।
लोकनाथ सापकोटाको रचना,संगित, स्वरमा भरिएको भिडीयोको गितमा टिका पुन, सानु शर्मा , स्वरुपा रसाइलीको पनि साथ रहेको छ । भिडियोलाई छायांकन रत्न ब.गोले, टंक के.सी, सम्पादन विकाश ज्ञवाली र निर्देशन स्वयम लोकनाथ सापकोटा र सुजन न्यौपानेले गरेका हुन । भिडियोमा राज्यका नेता, कलाकार, समाजसेवि, उद्योगी लगायत बरिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
नवोलीकनै संसद भवनवाट सभामुखले सार्वजनिक गरेको भिडीयो कस्तो छ त ? भिडीयो हेर्न तलको लिकं खोल्नुहोस्